Baarlamaanka Puntland oo go’aamiyay in si wadar ah loo ansixiyo Golaha Wasiirada Maamulkaas – XOGMAAL.COM
Baarlamaanka Puntland oo go’aamiyay in si wadar ah loo ansixiyo Golaha Wasiirada Maamulkaas
By Soomaaliya	 On Feb 10, 2019
Baarlamaanka Maamul Goboleedka Puntland ayaa kulan ay maanta yeesheen ku ansixiyey in si wadar ah loo horkeeno baarlamaanka si codka kalsoonida loo siiyo ama loogu diido Golaha Wasiirada Puntland.
Fadhiga uu yeeshay Baarlamaanka Putnland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa illaa 53 xildhibaan iyadoo markii cod loo qaaday qaabka loo siinayo kalsoonida Golaha Wasiirada ay u codeeyeen in si wadar ah loo horkeeno 26 mudane halka 24 ay diideen waxaana ka aamusay 3 xildhibaan.
Baarlamanka ayaa hore u go’aamiyay in xukuumadda cusub mid-mid loo ansixiyo si loo hubiyo tayada shakhsiga wasiirka noqon doona hase yeeshee go’aankaas ayaa haatan meesha ka baxay.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in uu ku dhowaaqo liiska golaha wasiirada cusub kuwaasoo loo gudbin doono Baarlamanka si ay u ansixiyaan,iyadoo xilligii loo qabtay ay ku eg tahay maalinta Isniinta ah ee soo socota.
Dil argagax leh oo goordhow ka dhacay xaafad ka tirsan degmadda Hodan
Shaqsiyaad Soomaali ah oo abaal Marin lagu Siiyey magaalo ka tirsan Mareykanka